GREEN musasa PORDUCTS CO., LTD hunogadzwa 2010 muna Changzhou guta, Jiangsu dunhu, China. Iro specialized mutende, akarara bhegi, kupikiniki negumbeze, musasa negumbeze, kuzvicheka-Inflatable nhoo, musasa midziyo uye vamwe mumatende nenhumbi. Kune kumativi 130 vashandi fekitari yedu.
Takazvitsaurira kupa wakwanisa & vakachengeteka zvigadzirwa. Vose sangano chati uye Workflow vari dzinofambiswa ne chinangwa ichi. All zvigadzirwa vari iongororwe mumwe nomumwe pamberi zvacho. Vazhinji zvigadzirwa edu vakapfuura hama bvunzo zvakumbirwa ne European kumusika uye North America pamusika, kusanganisira AZO, CADMIUM, PAHs, mutobvu CONTENT, kuzadzisa, PHTHALATES, FORMALDEHYDE, EN13537, EN71, CPAI-84, CPAI-75, ISO5912.
Tinodada kutsvakurudza kwedu & kukura, izvo zvinotibatsira kugovera zvinhu zvitsva zvakawanda vatengi vedu uye kubatsira yakawanda vatengi edu kuti pfungwa dzavo riitike.
Ani tiri basa pamwe?
Unhu yedu zvigadzirwa akanaka uye akatendeka mabhizimisi manyorerwo vaiwana isu Vatengi vakawanda, kusanganisira Eureka, Nordisk, Red gava, Obelink, E. Leclerc, Rusta, ALDI, UNHCR, neshumba dzakawanda, Military dhipatimendi kubva kunyika dzakasiyana ..., kana uchifunga kuti zvinokosha iwe, ndapota usazeza nesu!
Kwete 168-3, North Qingyang mugwagwa, Changzhou, Jiangsu dunhu, China
3600pcs 3 mwaka yekurara bhegi yakagadzirira s ...
Imwe nzira yekumira kumusoro pop-up matende-2
Imwe nzira yekupeta kunze kwese kubuda matende